पत्रपत्रिका - Page 839 of 850 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and morewww.khabardabali.com | Page 839 पत्रपत्रिका - Page 839 of 850 - www.khabardabali.com
काठमाडाैं । पछिल्ला केही दिनयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी हुने क्रम बढेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेका हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमितभन्दा मन्त्रीको खल्तीबाट आउने ठाडो प्रस्तावको...
काठमाडौं । तराई-मधेसमा शीतलहरले मृत्यु हुनुलाई अझै दैवीप्रकोप मानिन्छ । मैदानी भागका यी बस्तीमा वर्षैपिच्छे शीतलहरबाट गरिब नागरिकको ज्यान जान्छ । दैवीप्रकोपकै लागि भनेर केन्द्रमा जम्मा भएको ३ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूको...
काठमाडाैं । सरकारले ०३७ मा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापनामा उनीहरूको भूमिकाको सम्मान गर्दै हत्याकाण्डको ३७ वर्षपछि शुक्रबार सहिद घोषणा गरिएको...
पुस २९ गते, २०७४ - ०७:२३
काठमाडाैं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा साझा उम्मेदवार टुंगो लगाउन चारबुँदे मापदण्ड बनाएका छन्। त्यसकै आधारमा छलफल गरेर साझा उम्मेदवार बनाइने उनीहरूले...
काठमाडाैं । नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धीका चार धारा परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालयमा विहीवार र शुक्रवार बसेको वैठकले दुई महिनापछि सातौँ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री देउवालाई चार आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले...
काठमाडाैं । सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच शुक्रबार मध्यराति पाँचबुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा र केसीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको...
डा. लक्ष्मण ज्ञवाली, अधिवक्ता/शिक्षक ललितपुरको पुल्चोक क्याम्पसको खेल मैदान । हजारौँ विद्यार्थी दीक्षित हुन लामबद्ध थिए । दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भिडमा एक पात्र मेरो आँखामा ठोक्किए...
काठमाडाैं । सीमाभित्रैको रकम राखेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएका ती विवरण पत्यारलाग्दा भने छैनन् ।उम्मेदवारहरूले भोजभतेरमै लाखौं खर्चेको देखेका मतदाता वास्तविक हिसाब आयोगको सीमाभन्दा निकै...
पुस २८ गते, २०७४ - ०७:५७
काठमाडाैं । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्ने काममा ढिलाइ गर्दै गएको छ । गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालका लागि दुवै काम थाती राखिएका छन् । शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विषयमा...